‘यार’लाई पद्यश्री साहित्य पुरस्कार- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक ७, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — नेपाली साहित्यको विकास तथा विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएबापत डा तारानाथ शर्मा (तारानाथ भण्डारी)लाई ‘पद्यश्री साधना सम्मान’ र आख्यानकार नयनराज पाण्डेको सस्मरण सङ्ग्रह ‘यार’लाई ‘पद्यश्री साहित्य पुरस्कार’ प्रदान गरिएको छ ।
खेमलाल हरिकला लामिछाने समाजकल्याण प्रतिष्ठान, चितवनद्वारा स्थापित ती सम्मान र पुरस्कारका राशी दुई लाख रुपैयाँसहित सम्मानपत्र रहेको छ । प्रतिष्ठानले विसं २०६३ देखि वर्षभरि प्रकाशित साहित्यिक कृतिमध्ये एक र विसं २०६७ देखि साहित्य र कलामा दीर्घ साधना गर्दै आएका एक स्रष्टालाई सम्मान र पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ ।
प्रतिष्ठानद्वारा बुधबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जीवा लामिछाने र उनका माता हरिकला लामिछानेले संयुक्त रुपमा उक्त पुरस्कार एवम् सम्मान प्रदान गरेको हो ।
दार्जिलिङबाट प्रकाशित हुने साथी साप्ताहिक पत्रिकामा इलाम शीर्षकको निबन्ध २००८ सालमा छपाएर नेपाली निबन्ध साहित्यमा उदाएका डा शर्माका सम्पादन तथा लेखनमा हालसम्म ३३० कृति छन् ।
सो अवसरमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लामिछाने, उपाध्यक्ष धनराज गिरी र अमर न्यौपानेले प्रतिष्ठानका गतिविधिमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
सम्मानित व्यक्तित्व डा शर्माले उमेरले आफू ८० काटे पनि साहित्य रचनामा कमी नआएको बताए । अर्का पुरस्कृत स्रष्टा पाण्डेले पुरस्कार पाउनु लेखकको जीवनमा सुन्दर घटना होइन, असल कृतिको सिर्जना गर्न सक्नु नै सर्वाधिक सुन्दर घटना भएको बताए ।
प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७५ १८:३२
खोकनावासीलाई पिरैपिर- 'अर्को वर्ष धान फलाउन पाइएला कि नपाइएला !'
कार्तिक ७, २०७५ शब्द तथा तस्बिर : अंगद ढकाल
ललितपुर — दसैं सकिए लगतै उपत्यकावासीहरु धान चुट्नमा व्यस्त छन् । त्यस्तै व्यस्त छन् खोकनावासी पनि । पाँच महिना अघि हरियाली धान खेत अहिले पाकेर पहेँलपुर भएको छ । यसपाली धान राम्रो फलेकोपछि खोकनावासी उत्साहित त छन् तर उनीहरुमा दुविधा र चिन्ता पनि थपिएको छ । अर्को साल धान फलाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चिन्ताले पिरलेको छ उनीहरुलाई ।
'खोकनाबासीले अर्को साल धान फलाउन पाउने हो कि हैन थाहा छैन । माझ फाँट हुँदै फास्ट ट्र्याक बाटो निर्माण हुँदैछ,’ स्थानीय कृष्ण भगत महर्जनले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, 'यसपाली त धान भित्र्याइयो अर्को साल के भित्र्याउने ?'
प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७५ १८:११
साकेला सिलीको अर्थ खोज्दै किराती